Friday, 11.10.2017, 07:35am (GMT6.5)
केही बर्ष अगाडी बाट हङकङमा बसोबास गर्दै आईरहेको उनी लामो दुरिका दौडहरुमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन। त्यसो त केही समय अगाडि चीन के देक्विन प्रान्तमा भएको मेइली १०० किलोमीटर अल्ट्रा इन्ड्युरेन्स रेसमा पदक समेत थापेका थिए।
"कहिले देखि र कस्को प्रेरणामा यस्ता दौडहरु सुरु गर्नु भो? यसबाट के फाईदा हुन्छ?" भनी सोधिएको प्रत्युत्तरमा भने " नेपालमा लामो समय सम्म ट्रेकिङ पेसामा लागेकोले प्राकृति सङ्गको सामिप्यता बढ्यो।त्यसपछी एकाएक हङकङ जस्तो भिडभाडमा आफुलाई हराउदा नोस्टाल्जियाले निसास्सिएको अनुभव भो, त्यस पछि हङकङमा हाईकिङ गरे। लामो तथा छोटो दुरिका दौडहरुमा भाग लिन शुरु गरे। तुलनात्मक रुपमा लामो दौडमा नतिजाहरु राम्रो आउन थाल्यो। मैले हङकङ आए प्प्छी नै दौड शुरु गरेको हु। छुट्टिको समयमा आफू लगायत अन्य जो कोहिलाई पनि ग्रुप बनाएर भेन्टियर हाईकिङ गराईदिन्छु। हङकङ जस्तो ब्यस्त, तनावपूर्ण बाताबरण, पारिवारिक परेशानि आदिलाई रिफ्रेस गर्न हाईकिङ नै एक मात्र टनिक हो"। उनी थप्छन " खर्चालु र चुनौती पुर्ण भए पनि आफ्नै रहरले दौडेको हु, भविष्यमा उमेर समुहमा जित हालिस गर्ने सम्भावना पनि छ।"
उनी आगामी बर्ष अप्रिलमा हुने जापानको १७० किलोमीटर लामो अल्ट्रा ट्रैल माउन्ट फुजि जाने तयारीमा रहेको समेत बताए।